Ciidamo Maraykan ah oo Duulaan fashilmey kusoo qaaday Jamaame. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jan 20, 2018 237 0
Saqdii dhexe ee habeenkii xalay ayaa cidamo katirsan dowladda Maraykanka oo ay la socodeen kuwa Soomaali ah oo ay iyagu tababareen waxay duulaan kusoo qaadeen degmada Jamaaame oo kamid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka oo ku hoos jira ku dhaqanka Shareecada Islaamka.
Ciidamada Maraykanka oo watay diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa markii ay soo gaareen duleedka magaalada waxaa dagaal kala hortagay ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab oo ka war hayay dhaq-dhaqaaqooda.
Is rasaaseyn kooban kadib, ciidamada Maraykanka iyo kuwa soomaalida ayaa isaga cararay goobta, iyagoona ka cararay Agab milliteri kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta.
Markii ay fashilmeen kadib ayay dhowr hoobiye kusoo tuureen magaalada, balse ma geysanin waxyeello nafeed marka laga soo tago burbur gaaray qaar kamid ah guryaha dadka shacabka.
Isku deygan fashilmey ee lagu doonayay in lagu qalqal geliyo shacabka Jamaame wuxuu imaanaya xilli habeen hore ciidamo Maraykan iyo Soomaali isugu jira ay duulaan ku qaadeen machad islaami ah oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Jilliyaale oo qiyaastii 50 KM galbeed kaga beegan magaalada Jowhar, waxaana halkaas ay ku dileen afar caruur ah iyo macallin, halka ay qafaasheen tiro caruur da’ yar oo wax baraneysay.